Concentric Business Academy (Loikaw) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော သင်တန်း
The Annual University Journal on Innovative Research and Products 2018
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် အခမဲ့ ပညာဒါနအဖြစ် အခြေခံ ကွန်ပျူတာ အသုံးချသင်တန်း
Concentric Business Academy (Loikaw) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော အောက်ဖော်ပြပါသင်တန်းအတွက် စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းအမည်များ- #Leadership_and_Management #Human_Resource_Management #Project_Management #Sales_and_Marketing_Management (#including_lunch_and_coffee) အချိန် - 9;00am - 4;00pm နေရာ - ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်) နေ့ရက် - ၁/၂-၁၂-၂၀၁၈ သင်တန်းကြေး - ၁၅၀၀၀ိ/-ကျပ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)မှ ကျောင်းသား/သူများအတွက် (၁၀၀၀၀ိ/-)ကျပ် discount ဖြင့် ကျောင်းသားရေးရာဌာနတွင် (၂၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့-နေ့လည်ပိုင်းလာရောက်စာ၇င်းပေးပါရန်။ တခြားကျောင်းမှ ကျောင်းသား/သူများသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဗပိာုသင်တန်းတည်ရှိရာ နေရာတွင် စာရင်းပေးပြီး သင်တန်းကြေးပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)တွင် ပုံနှိပ်ထုပ်ဝေမည့် သုတေသနဂျာနယ်အတွက် သုတေသနပညာရှင်များ၏ စာတမ်းများအား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)တွင် အခမဲ့ ပညာဒါနအဖြစ် အခြေခံ ကွန်ပျူတာ အသုံးချသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် သင်တန်းသား/သူ သစ်များခေါ်ယူခြင်း 24-9-2018
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများအား ညွှန်ကြားချက်
Mobile Application Training ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)သို့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများအား ညွှန်ကြားချက်အရ #ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း ကိစ္စရပ်များကို (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ။ #အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်- ၀၈၃-၂၂၂၂၁၀၆ ၀၈၃-၂၂၂၂၁၆၈ (ရုံးချိန်အတွင်းသာ)
Mobile Application Training ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်းအယောက် (၉၀) ဦး တက်ရောက်နေပြီး တစ်ဖွဲ့လျှင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ (၃) ဦး ဖြင့် အဖွဲ့ပေါင်း (၃၀) ဖွဲ့စည်းကာ လေ့လာသင်ကြားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းတွင် အဓိကအားဖြင့် Introduction Android Build Tools, Android Layout, Android Control, Android Fragments, UI/UX for Android app, Database & SQL, Android Room, Retrofit, RxJava, Understanding MVC, MVP, MVVM on Android စသည့်အကြောင်းအရာများကို မျှဝေပို့ချပေးလျှက်ရှိသည်။ သင်တန်း၏ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် Soft Skill Training (Knowledge Sharing Session) ကို အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး CAPPS Solutions Myanmar PTE. Ltd ၏ Managing Director ဖြစ်သူ Mr Sean Chew နှင့် mVoter 2017 application ကို တီထွင်ရေးဆွဲခဲ့သူ ကိုမြတ်မင်းစိုးတို့က ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား သိရှိမှတ်သားထားသင့်သည့် ဗဟုသုတနှင့် အကြောင်းအရာများအား မျှဝေပေးခဲ့သည်။ Mobile Application Training ကို မွနျမာနိုငျငံအနှံ့မှ ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူ စုစုပေါငျးအယောကျ (၉၀) ဦး တကျရောကျနပွေီး တဈဖှဲ့လြှငျ ကြောငျးသားကြောငျးသူ (၃) ဦး ဖွငျ့ အဖှဲ့ပေါငျး (၃၀) ဖှဲ့စညျးကာ လလေ့ာသငျကွားနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ သငျတနျးတှငျ အဓိကအားဖွငျ့ Introduction Android Build Tools, Android Layout, Android Control, Android Fragments, UI/UX for Android app, Database & SQL, Android Room, Retrofit, RxJava, Understanding MVC, MVP, MVVM on Android စသညျ့အကွောငျးအရာမြားကို မြှဝပေို့ခပြေးလြှကျရှိသညျ။ သငျတနျး၏ အစီအစဉျတဈရပျအဖွဈ Soft Skill Training (Knowledge Sharing Session) ကို အောကျတိုဘာလ (၁၉) ရကျနေ့ တှငျပွုလုပျခဲ့ပွီး CAPPS Solutions Myanmar PTE. Ltd ၏ Managing Director ဖွဈသူ Mr Sean Chew နှငျ့ mVoter 2017 application ကို တီထှငျရေးဆှဲခဲ့သူ ကိုမွတျမငျးစိုးတို့က ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအား သိရှိမှတျသားထားသငျ့သညျ့ ဗဟုသုတနှငျ့ အကွောငျးအရာမြားအား မြှဝပေေးခဲ့သညျ။ #SamsungMyanmar #SamsungTechInstitute #MobileApplicationTraining2018 #YouthEmpowerment #BetterMyanmarတ
ကယားပြည်နယ် ဌာနဆိုင်ရာစုပေါင်း ဘုံကထိန်
November 14, 2018 by November
November 1, 2018 by November
ကျောင်းသား/သူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ၀န်ထမ်းများအတွက် ထပ်မံရောက်ရှိခြင်း
November 12, 2018 by November
ကယားပြည်နယ်ဌာနဆိုင်ရာစုပေါင်း ဘုံကထိန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်) မိသားစု
မြို့လုံးကျွတ် ဆွမ်းဆန်တော်လောင်းလှူပွဲ မြို့နာမ်ရွှေစေတီတော် ---------------- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)မိသားစု၏ စုပေါင်းကုသိုလ်
ကျောင်းသား/သူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ၀န်ထမ်းများအတွက် ထပ်မံရောက်ရှိခြင်း သူတို့လေးတွေလည်း ကျောင်းဖွင့်ရက်ကိုစောင့်မျှော်လျက်